Epoxy adhesive GT1111 ho an'ny lamasinina haingam-pandeha, China Epoxy adhesive GT1111 ho an'ny mpamokatra lamasinina haingam-pandeha, mpamatsy, orinasa - Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd
Eto ianao : Home>Product>Adhesive & lakaoly>Epoxy Composite Adhesive Series
Epoxy adhesive GT1111 ho an'ny lamasinina haingam-pandeha
Brand Name: ALOHA
Packaging Details: Kitapo plastika
Ora nanomezana: Manodidina ny 15 andro fiasana
Supply Fahaiza-: 10 Ton / taonina isanandro
● BEECORE Epoxy Adhesive GT1111 dia singa roa, ny mari-pana amin'ny hafanan'ny efitrano, ny fametahana rafitra avo lenta. Natao ho an'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha. Izy io dia manana tanjaka avo mifatotra, hery manety ary tsy misy rano mitete. Tsy misy fofona hafahafa sy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny mpampiasa.
● Ny adiresy epoxy namboarina GT1111 novaina adhesive tsy misy solvent tsy misy solvent roa, tsy misy formaldehyde sy benzene, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Satria azo avy amin'ny fanovana resin epoxy izy io, manana ny hamafiny tsara, ny tanjaka adhesion avo, ny fotoana fananganana maharitra, mora ny mametaka lakaoly, ny fanoherana ny fiatraikany, ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny hatsiaka avo lenta sy ny fahanterana, ny fanoherana ny fahanteran'ny hafanana fanoherana ny fahanterana, asidra ary alkaly ary tombontsoa maro hafa. Ny mpandraharaha lehibe (A) sy ny mpitsabo mpanasitrana (B) dia mifangaro ary ampiasaina arakaraka ny tahan'ny lanja A: B = 2: 1.
● Ity adhesive ity dia ampiasaina indrindra amin'ny fampifamatorana ny tabila-tantely, ny vokatra vita amin'ny boaty, sns., Ary azo ampiasaina amin'ny fatorana mitambatra amin'ny karazana metaly, hazo, puce, tile vita amin'ny poleta, vato, takelaka MgO sns. Mora ampiasaina ity vokatra ity, manana tanjaka fifamatorana avo lenta aorian'ny fanasitranana tanteraka, fanoherana famatrarana tsara, fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny fahanterana.
● Herin'ny fatorana avo
● fanoherana tsara
● fanoherana ny harafesina
● Fanoherana fanoherana
● Tokony hapetraka ao amin'ny trano fanatobiana entana na efi-trano ambany maripana, fotoana tsara kokoa tsy mihoatra ny 6-12 volana.
● Ny vokatra dia tokony ho tahiry amin'ny toerana maina, rivotra ary mangatsiatsiaka, herintaona ny talantalana, afaka manohy mampiasa raha toa ka tsy maninona ny fitsapana.
● Ity vokatra ity dia vokatra mampidi-doza mahazatra, tsy maintsy arovana miaraka amin'ny afo, loharanon'ny hafanana, sorohina ny orana sy ny filentehan'ny masoandro, miadana ny famoahana entana, ary ialao ny fiantraikany, ny fivadihana, ny horonan-taratasy sns.
Fanitarana tantaram-borona aramidin'ny foza ho an'ny takelaka sandwich milentika
Tantely tantely tantely super matevina ho an'ny fitsapana lozam-pifamoivoizana, sehatra milina, rafitra fiarovana ny kamio
Tantely tantely tantely anodized ho an'ny lalamby, fiara fitateram-bahoaka, tontolon'ny sambo